Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Presnel Kimpembe Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra izay malaza indrindra Kimpembe. Ny Presnel Kimpembe tantaram-pitiavan'antoko bebe kokoa Ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra ho anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fotoan'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviany, ny fiainam-pifandraisana, ary ny zavatra hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Eny, mahafantatra ny rehetra fa anisan'ny lehilahy 23 izy Frantsa frantsay izay nandresy ny World 2018 Cup ao Rosia. Na izany aza, vitsivitsy monja no mihevitra ny Presnel Kimpembe Bio izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Presnel Kimpembe Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Presnel Kimpembe dia teraka tamin'ny 13th of August 1995 tany Beaumont-sur-Oise, Frantsa. Teraka tany amin'i Isaac Kimpembe rainy izy ary tamin'ny Haisiana reny izay tsy dia fantatra loatra.
Niroborobo tany Frantsa i Young Kimpembe (sary eo afovoan'ireo zokiny roa lahy). Nalahelo mafy ny ray aman-dreniny izay naniry ny faniriany maro ary nanome toky foana izy fa manana akanjo ankafiziny indrindra amin'ny bibilava izy.
Ankoatr'izay, dia nomeny maimaim-poana izy ireo hanohy ny fitiavany ny baolina kitra amin'ny alàlan'ny fanoratana azy AS Eragny tamin'ny 2002 fony izy efa antitra 7. Noho izany, Kimpembe tahaka ireo kintan'ny baolina kitra maro no nanomboka ny asany tamin'ny lalao baolina kitra tamin'ny filalaovana ho an'ny ekipa tanora.
Presnel Kimpembe Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Asa fanorenana
Kimpembe dia nandany telo taona AS Eragny talohan'ny nifindrany tany amin'ny elatry ny zana-pianakaviana frantsay frantsay, tao Saint-Germain (2005 Paris) (amin'ny fanasana ny scouts PSG).
Tao amin'ny academy youth of Paris Saint Germain ny fisian'ny lalao baolina kitra dia hita fa mety haharitra mandritra ny fotoana maharitra ny PSG taorian'ny nanamboarany ny toetrany baolina kitra toy ny androany; fihenam-bidy, famakiana ny lalao sy ny atletisma.
Presnel Kimpembe Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Mitsangàna mba haka izany
Valopolo taona taty aoriana, dia niroso tamin'ny ekipa PSG tao 2013 i Kimpembe ary nanao ny lahateniny ho an'ny klioba tamin'ny oktobra 2014. Ny fampisehoana maharitra ny endrika tsara amin'ny lalao klioba sy ny fampifanarahana amin'ny fanovana ny andraikitra dia nahatonga azy ho mpankasitraka izay nihevitra azy ho mendrika ny ho mpiandriam-pandaharana tsy tapaka.
Mahavariana ny mpankasitraka Kimpembe ny Frantsay taloha sady mpiaro an'i Arsenal William Gallas, izay nantsoiny ho "hoavin'ny baolina kitra Frantsay". Mandroso haingana hatramin'ny fotoam-bolana i Kimpembe no nanaporofo fa ho avy amin'ny Football Football amin'ny alalan'ny fanangonana anaram-boninahitra maro ho an'ny klioba sy ny firenena, anisan'izany Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophee des Champions ary ny mondial 2018 ao Rosia. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Presnel Kimpembe Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Relationship Life
Ao ambadiky ny mpilalao Frantsay rehetra dia jiro tsara tarehy na tranga mahafinaritra ny Girlfriend and Kimpembe. Ilay mpilalao sarobidy dia manana karazana mahagaga izay mandeha amin'ny anarana hoe Sarah.
Na dia kely aza no fantatra momba ny fifandraisan'izy ireo raha toa ka tia ny fiainany manokana i Kimpembe. Na izany aza, i Sarah dia tonga toy ny saribakoly tsara tarehy izay tian'i Kimpembe hitazam-potsiny.
Ny fifandraisan'izy ireo dia namorona zazalahy iray izay mirehareha amin'i Kimpembe ary tsy mitsahatra ny maneho azy amin'ny media sosialy miaraka amin'ny fanamaivanana comic kely. Izy no mitondra ny lohateny hoe "Ilay Mpanjaka Liona" izay mampiseho ny liona no mitondra ny jadiny.
Presnel Kimpembe Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Manohana ny ray aman-dreny
Kimpembe dia manana fianakaviana be fitiavana izay manohana ny asany ary tsy mitsahatra manome azy fanohanana ara-moraly.
Ny rainy dia mpijery mozika tsy tapaka izay mijery azy milalao eny amin'ny lampihazo. Ny fanatrehany dia natao mba hampahatsiahivana ny kintan'ny filàna eo amin'ny lalao.
Toy izany koa ny momba ny renin'i Kimpembe izay lazainy hoe:
Ilay hany tokana izay tsy hanome tsiny ahy, ilay hany tokako tsy misalasala, ilay hany tokana izay tsy namela ahy hidina ary hatramin 'ny dingana voalohany nataoko ❤️ Mama ❤️
Presnel Kimpembe Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Pastime Activities
Kimpembe dia iray izay mahafantatra ny fomba fampiasana ny fialam-boly amin'ny asa aman-draharaha ara-tsaina. Nahazo izany izy amin'ny fanaovana lalao video ary indraindray dia mijery sarimihetsika mba hahatonga azy ho talohan'ny lalao manan-danja.
Presnel Kimpembe Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Mitantara ny maha-olona
Maro no mihevitra azy ho toy ny mpilalao mahay indrindra, na ny teknika indrindra, fa ny rehetra dia miombon-kevitra amin'ny asa mafy sy ny fahavononana
Kimpembe tia tetikasa famoronana, tsy mahagaga raha nametraka azy ho endrika Adidas Glitch (kiraro anatiny miaraka amin'ny hoditra ivelany avy any ivelany, izay ahafahana mampifangaro endrika) any Paris
Ny mpanazatra ny aingam-pananana teo aloha dia efa tao anaty tafatafa iray teo aloha nanamarika fa ny fananganana an'i Kimpembe amin'ny laza dia azo lazaina fa ny fanetren-tenany, ny fototry ny hatsaran-toetra rehetra.
Presnel Kimpembe Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Pets
Kimpembe dia mahavariana ny alika roa antsoina hoe Letty sy Nala ao amin'ny fonenany.
Ankoatra ny maka sary an-tsary ny biby fiompiny (na namana mahatoky), Kimpembe koa dia maka sary an-tsary ny duo izay navoakany tao amin'ny media sosialy ihany koa.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny anay Presnel Kimpembe Tantara an-tsary momba ny tantaram-piainana malaza. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Benjamin Mendy tantara an-tsary momba ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra